25 Mobile Marketing Stats maka 2014 na Ihe | Martech Zone
Anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ na ntanetị anyị ma na-eme mgbanwe kwa ọnwa iji melite otu esi egosipụta saịtị anyị. Ọ dịghị mfe inye ụdị nlele dị iche iche na ngwaọrụ, mana ọpụpụ okporo ụzọ na-aga n'ihu na-ebuwanye ibu desktọọpụ ka anyị mara na ọ bụ nnukwu ego. Enweghị ihe ọ bụla na-akụda mmụọ karịa ịpị njikọ na ịdata na peeji nke ị na-enweghị ike ịgụ mgbe ị nọ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Kpọọ 2014 afọ mbugharị ụlọ ọrụ na-ejide n'ezie. Ọgbakọ dị mkpa n'ezie inyocha mobile azum azum ịgbatị ha iru. A ngwa ngwa doo nke BYOD, ohere ndị ahụ na-eto eto maka ndị na-ere ahịa na ndị na-enye nkà na ụzụ. Chịkọta ngwaọrụ dị iche iche dị ka igwe ojii na nnukwu data na-enyere ndị ọchụnta ego aka ịba ụba na usoro ọhụụ ha na-agagharị agagharị. Weebụ
Ahịa ekwentị na United States na-aga n'ihu iji mepụta $ 400 ijeri na ahịa site na 2015, site na $ 139 na 2012. Ọ bụrụ na ịghachighị atụmatụ gị, ị ga-alarịrị ala ma chọọ itinye saịtị saịtị, ngwa, ozi ederede, na nkwado iji weghara atụmanya ma ọ bụ nlebara ndị ahịa anya mgbe ha na-agba ọsọ. WebDAM kacha ọhụrụ infographic ọnọde 25 na-akpali ọnụ ọgụgụ banyere ugbu a na ọnọdụ na mobile, na mobile ahịa òkè, uto nke mobile ojiji na ndị ọzọ.
Tags: 2014ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa mkpanakastats ahia ahiaọnụ ọgụgụ mobileọnụ ọgụgụ ekwentị
Mee 20, 2014 na 11: 42 AM
Ndewo Douglas, nnukwu ihe omuma. Ọ ga - emetụta ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na atụmatụ ha, ebe ọrụ ahịa azụmaahịa abụrụla ihe dị oke mkpa, ma ebe a bụ ọnụ ọgụgụ iji gosipụta ya.